A ka nwere ọtụtụ ka nwere ike ikwu mgbe ọ na-abịa 8mm ndekọ, na anya ha na-enye bụ ihe pụrụ iche, na n'ihi na ọtụtụ ihe omume pụrụ ọ bụghị nanị na-kwesịrị ekwesị, ma pụrụ n'ezie ime ka oru ngo ọrụ nnọọ mma karịa a dị ọcha dijitalụ kpọọ ụzọ. Ọ dị mfe taa, na nri software, na-na '8mm anya' na ọ bụla nke gị na fim N'ezie, ma dị ka ụfọdụ ndị na-, ha nwere ike na-ụfọdụ oké mmetụta, ọ dịghị ihe na nnọọ dị ka ezigbo ihe n'ihi na ezigbo ochie ịke. Ya mere, ọ bụrụ na anyị maara na a oru ngo kwesịrị na mmetụta, ihe bụ nhọrọ kasị mma nke igwefoto iji nwere ahụ magburu onwe 8mm anya?
My nọmba otu ghota maka 8mm igwefoto, a Sony nlereanya nwere ogologo mma set na-agụnye ihe niile ị chọrọ na-eme ka nke kacha mma mma na fim kwere omume. Ọ na-amalite anya na a kọmpat, mfe jikwaa size na a doro anya, foldout ihuenyo na-eme ka agbapụ a obi ụtọ, a oké mgbochi shake atụmatụ na-ebelata mmetụta nke okwukwe aka ebe filming, na-agbakwụnye na ma a ugboro 20 ngwa anya mbugharị na a 330 ugboro dijitalụ mbugharị na ihe ndị magburu onwe oghere mezue foto. Ọ na-nwere nnukwu ndụ batrị nke n'elu awa 18 otú ị gaghị na-agba si nke ike ebe ị na-dí ndu. A n'ezie ezi ngwaahịa na elu ebe maka 8mm video tech.
Onye a bụ a digital8 igwefoto, Ndekọ dijitalụ video ka a teepu ọkara. Nke a bụ ọmarịcha ikwere dị ka ọ na-enye ohere mfe nyefe nke dere video kọmputa na dijitalụ format site na ya na-wuru na USB interface.
Ke adianade do o nwere oyiyi stabilization, ogologo ndụ batrị, doro anya na ihuenyo nakwa dị ka ugboro 20 ngwa anya na 990 ugboro dijitalụ mbugharị owuwu na elu àgwà oghere.
A ọma na-apụta na-edekọ si Canon àjà a mara mma doro anya na ihuenyo, 22 ugboro ngwa anya mbugharị na a nnukwu ugboro 800 dijitalụ mbugharị, Canon kwukwara ọtụtụ ndị ọzọ na atụmatụ aka na usability nke igwefoto a. Image stabilization bụ ọkọlọtọ, na ike idekọ ka oyiyi na teepu na Digital Photo mode nwere ike ịbụ incredibly bara uru dị ka mma. Canon si autofocus usoro bụ eleghị anya otu nke kasị mma dị na ọ bụla na-edekọ na ọ na-arụpụta oké achọ footage ihe ọ bụla isiokwu. Ọ dị mfe iji na ala ke ubọk.
Ọzọ Sony, ha nwere a akụkọ ihe mere eme nke magburu onwe ngwaahịa ebe a, nke a nwere ike idekọ Hi8 footage na stereo ụda, na o nwere 20 ugboro ngwa anya mbugharị na a 990 ugboro dijitalụ mbugharị si elu àgwà oghere. The n'ụzọ zuru ezu moveable ihuenyo bụ doro nnọọ anya na igwefoto dabara comfortably n'aka-eme ka ọ mfe iji. Agbatiri nso nke Hi8 na-eme ka mmepụta n'ezie guzo ma na-àgwà dị dị ka ọ na-akawanye maka ọkara. A ọma mechie ngwugwu na awade ọtụtụ n'ihi na onye ọrụ na a na-agbanwe agbanwe na elu àgwà mmepụta, a oké 8mm-edekọ ihe.
Onye a bụ a bit dị iche iche, na bụ hugely oké ọnụ ịzụta ọbụna taa, mere maka ọkachamara ndekọ, kama karịa aga ngwaahịa iji na enthusiast ma ọ bụ n'ụlọ ọrụ.
Otú ọ dị, ọ dị mkpa na-agụnye ke a 'kasị mma nke' ndepụta, dị ka e nwere ndị ga-achọ nke kasị mma 8mm teepu ndekọ igwefoto si n'ebe n'agbanyeghị nke na-eri. Na nke a bụ ya. Kennyeghari, ọkachamara anya m, na-eme mgbanwe iji widescreen ma ọ bụ 4: 3 usoro na a oke nke 60i, 30p ma ọ bụ sinima njikere 24p etiti udu, na Canon XL2 e mere site ná mmalite na-a na agbasa ozi n'ikuku àgwà ndekọ ngwaọrụ. Overkill maka ọtụtụ n'ime anyị, ma ọ bụrụ na ị bụ onye na budding film onye na-achọ ndị ọkachamara ngwá ga-alanahụ na ubi na-emepụta ndị kasị mma mmepụta o kwere omume, nke a bụ igwefoto na imezu ya.
A dị iche iche emeputa si nnukwu 2! Samsung emepụta ụfọdụ àgwà ngwaahịa ihe karịrị afọ, na nke a bụ ikekwe otu n'ime ndị guzo omume, a oké mma set napụtara na budata dị ọnụ ala karịa na-efu ndị ọzọ mere n'oge ahụ.
A oké ihuenyo, 22 ugboro ngwa anya na 880 ugboro dijitalụ mbugharị, a ọma-e na mfe iji interface eme ka a na a oké oke maka onye ọ bụla ọhụrụ na-ajụ, na nnukwu ndụ batrị na-egbochi ike na-echegbu mgbe filming.
A oké ngwugwu n'ozuzu, na otu onye karịsịa adabara onye ọ bụla na-achọ ka nnwale na 8mm maka oge mbụ, a ngwaahịa maa iji na-enyere onye ọrụ nweta ihe kasị mma video ha nwere ike nke akụrụngwa.
Onye ọzọ si dị iche iche emeputa, ebe Samsung were isi echiche ma gbalịa tinye na usability maka onye ọ bụla, Sharp were a dị iche iche n'okporo ụzọ na kere ngwaahịa na-ọma dị iche iche si mpi.
E wezụga anụ ahụ dị iche iche, nke ụfọdụ ga-n'anya na ndị ọzọ ga-eji, na-egbusi-agụnye nnukwu ákwà, 16 ugboro ngwa anya mbugharị na ọbụna ikike tinye na utu aha.
The okirikiri nhọrọ ukwuu nwere ike na-ụfọdụ ịlụ na-ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma na awade a mma ọzọ ka nso nke identikit igbe anyị na-ahụ na-ahụkarị.
Ọzọ nke Sony magburu onwe nso nke dijitalụ 8 ese foto, onye a nwere na mbụ 20 ugboro ngwa anya mbugharị na-agbakwụnye na a 330 ugboro dijitalụ mbugharị na oyiyi stabilization n'elu, tinyere ike idekọ na stereo si wuru na ọkà okwu na jikọọ elu àgwà mpụga ọdịyo ndekọ ngwá dị ka mma. Na a ngwa ngwa shutter mode nakwa gbakwunye na o kwere omume mmetụta, na mgbakwunye na nke dijitalụ 8 abamuru nke mfe nyefe na kọmputa maka edezi, na DCR-TR7000 ọnọde a nke ọma mechie ngwugwu.
A Canon Hi8 igwefoto na nwere 20 ugboro ngwa anya na 700 ugboro dijitalụ mbugharị tinyere image stabilization, ya abịa na a mma, na-egbuke egbuke ihuenyo na a nwa ọcha na nchọta onyonyo ka ihe ike dị iche iche na égbè ekwekọghị, na ya lithium batrị awade a nnọọ ogologo égbè oge n'etiti ebubo. Ọzọkwa apụta bụ oké autofocus hụrụ ndị ọzọ Canon ese foto na n'ezie arụ ọrụ nke ọma na-eme ka kpọọ nke video n'agbanyeghị nke isiokwu ihe dị mfe uru.
10. Kodak Brownie Movie Igwefoto II
Anyị ikpeazụ nhọrọ bụ maka onye ọ bụla chọrọ n'ezie weghara na ezigbo ya, retro 8mm anya. Na nke ahụ bụ site na iji ihe ezigbo ya, retro 8mm-edekọ ihe.
Nke a bụ dị ka isi dị ka ọ na-akawanye, ọ dịghị ụda, isi na nchọta onyonyo usoro, ma ọ bụrụ na ị chọrọ na 50 anya, na-eji a 50 igwefoto ga-enweta ya maka gị.
Ọ dịghị ndepụta bụ mgbe keukwu ezu nke N'ezie, ma ebe a anyị gbalịrị agụnye ole na ole n'èzí nke igbe nhọrọ maka ndị na-achọ ihe dị iche iche, ma ọ bụ Kodak Brownie ma ọ bụ, na ndị ọzọ na njedebe nke ọnụ ọgụgụ, Canon zuru on ọkachamara igwefoto. Gịnị bụ doro anya bụ na e nwere ihe 8mm igwefoto si n'ebe ona ọ bụla mkpa na mmefu ego ka, ọ bụrụ na ị na-ele.
Otú nyefee 8mm Videos ka Computer (PC)
> Resource> Igwefoto> Top Iri 8mm Camcorders / Video ese foto maka ndekọ